RASMI: Jurgen Klopp oo xaqiijiyey in Sadio Mane uu garoomada ka maqnaan doono inta ka harsan xilli ciyaareedkan – Gool FM
(Liverpool) 07 Abriil 2017 – Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ugu dambayn xaqiijiyey in Sadio Mane uu garoomada ka maqnaan doono inta harsan kal ciyaareedkan.
Dhaliyaha reer Senegal ayaa waxaa soo gaaray dhaawac Jilibka ah kulankii Sabtidii ee Merseyside derby oo ka dhacay garoonka Anfield, kaasoo ay 3-1 ku dubteen Everton isagoona garoonka ka baxay daqiiqadii 57-aad.
Bilowgii usbuucan Mane ayaa warbaahinta xiriirka bulshada soo dhigan sawir uu jilibka ugu xiran yahay qalabka dhaawacyada difaaca, macallin Klopp ayaana maanta xaqiijiyey in 24-sano jirkaan uusan markale ciyaari doonin xilli ciyaareedkan.
“Waxaan hubaa inuu u baah naan doono qalliin, ma hubno goorta ay noqoneyso, laakiin waxaa cad in xilli ciyaareedkiisa uu soo dhammaaday.” tababaraha Liverpool ayaa sidaas u sheegay Suxufiyiinta maanta oo Jimce.
“Waxa ay noqon doontaa wax aan macquul ahayn inuu isagu markale ciyaaro xilli ciyaareedkan, wuxuu heli doonaa fasax dheer ilaa xili ciyaareedka dambe,
“Taasi waa wax aan filayey, waxa uu diyaar noqon doonaa xilli ciyaareedka soo socda, taasi waa warka kaliya ee wanaagsan.”
Warkan uma wanaagsa Liverpool, maxaa yeelay waxaa la xusuustaa sida ay Reds u dhibtootay intii uu Mane kaga maqnaa ciyaarihii koobka qaramada Afrika.
Mane ayaa dhaliyey 13 gool tan iyo markii uu ku soo biiray Liverpool, kolkaasoo uu £34m kaga soo dhaqaaqay kooxda Southampton xagaagii la soo dhaafay.